Qiimaha shidaalka Masar oo kordhay - BBC Somali
Qiimaha shidaalka Masar oo kordhay
Image caption Gaari shidaal lagu shubayo dalka Masar
Isaga oo aanan wax digniin ah horay u sii bixin ayaa madaxweynaha Masar Cabdifitax Al-sisi waxa uu sare u qaaday qiimaha shidaalka 40%, halka uu qiimaha petrolka ay tayadiisu sareeyso uu sare u qaaday 78%.
Sidoo kale qiimaha adeega Korontada ee dalkaasi ayaa sare u kacay, waxaana la filayaa in uu sii labalaabmo muddo shan sanno gudahood ah.
Koronta yarida ayaa waxaa caadi ka noqotay dalka Masar, waxaana taasi loo aaneeynayaa sida ay sheegayaan masuuliyiinta in la joojiyey lacagihii ay dowladda ku kabi jirtay shidaalka iyo in aan la dayactirin oon la balaarinin awooda warshadaha korontada ee dalkaasi.
Sare u kaca qiimaha shidaalka ayaa inta badan waxa ay dalkaasi Masar ka dhigtaa meel ay dibad baxyo ka dhacaan.
Waxaana la arki doonaa sida shacabka Masar, ay uga jawaabaan qiima kordhintan cusub ee uu soo jeediyey madaxweyne Sisi.